Vanhu Vatatu Vofa neCovid-19
Bazi rezvehutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro kuHarare, Bulawayo neMasvingo.
Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika parizvino vave mazana maviri nemakumi mapfumbamwe kana kuti 294.
Vanhu zana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 121 vakabatwa nechirwere ichi nezuro.
Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi nezuro ava Havana nhoroondo yekubuda munyika. Matababeland North ndiyo ine vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanove makumi manomwe nemana, Bulawayo ine makumi matatu nevaviri, Midlands gumi uye mumwe chete kuMasvingo.
Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zvuru gumi nemazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 10, 839. Vanhu vapora kusvika parizvino zvuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 8, 972 mushure mekunge vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri vapora nezuro.
Vanhu vachiri kurwara churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 1, 573. Zvichakadaro, mashoko atumirwa studio 7 neafrican union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezvuru mazana maviri kana kuti 2, 2 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zvuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 53, 853. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezvuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1,9 million.
South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 67, 7 million.
Vafa muAmerica vadarika zvuru mazana maviri nemakumi masere nematatu kana kuti kuti 283, 000, vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemana nezvuru mazana mapfumbamwe kana kuti 14, 9 million.
Pasi rose, vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1, 5 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 million.